Ianaro ny fomba fifanakalozana varotra amin'ny 2021 sy ny tombom-barotra amin'ny Signal Forex maimaimpoana isan'andro 🥇
Wallet Cryptocurrency tsara indrindra
78.77% ny kaonty CFD antsinjarany very vola
Ny dolara dia manamafy ny tombony, ny fifantohana amin'ny Euro
Alakamisy, Septambra 30, 2021
Rehefa nandevona ny fiakaran'ny vidim-bokatra ny Dolara tamin'ity herinandro ity, dia nivadika ho Euro ny fifanakalozana fifantohana, indrindra fa ny tsena rehetra. Mandritra izany fotoana izany, ny fiakaran'ny fihetseham-po amin'ny risika dia manampy ny vola varotra sy ny Sterling, miaraka amin'ny Dolara Aostraliana no mitarika ny entana. Amin'ny toe-tsaina mety hampidi-doza dia malemy kokoa ny yen sy Swiss franc. Ny tahan'ny tsy fananan'asa amin'ny Eurozone […]
AUDUSD Mitohy miakatra eo afovoan'ny tsena ratsy
Fanadihadiana momba ny vidin'ny AUDUSD - 30 septambra Nandritra ny fotoana amerikanina dia nahazo vahana ny AUDUSD ary niakatra hatramin'ny 0.7257, avo isanandro vaovao tohanan'ny fihenan'ny dolara amerikana marobe. Ny DXY dia nilatsaka 0.20 isan-jato, nanamarika ny fotoana voalohany nilatsahany taorian'ny nahazoany tombony efatra andro. Na eo aza ny vokatra azo avy amin'ny fatorana amerikana ary tsy mitovy US […]
Dogecoin (DOGE) Miovaova mihoatra ny $ 0.20 ny fanohanana, ny fihenan'ny 0.16 $ dia azo inoana
Haavo lehibe fanoherana: $ 0.45, $ 0.46, $ 0.47Fanohanana lehibe: $ 0.25, $ 0.20, $ 0.15 DOGE / USD Fironana maharitra: Ny vidin'ny BearishDogecoin (DOGE) dia nidina hatramin'ny $ 0.20 taorian'ny nanapahany ny ambany teo aloha tamin'ny $ 0.21. Androany, ny crypto dia miovaova mihoatra ny $ 0.20 fanohanana. Talohan'ny nilatsahan'ny vidiny farany teo dia nihena ambanin'ny $ 0.21 ny vidin'ny DOGE, nanandrana indray izy io alohan'ny namerenany ny fihenan'ny fidinana. Amin'izao fotoana izao, ny […]
Ny vola digital dia mahasoa amin'ny toekarena manerantany: Tatitra BIS
Tatitra vaovao navoakan'ny Bank of International Settlements (BIS) sy ny vondrona banky foibe no manamafy fa ny vola dizitaly dia afaka mandrindra ny fametrahana haingana sy famindrana mora vidy kokoa. Roa herinandro lasa izay, nanambara ny lehiben'ny Hub Innovation Bank of International Settlements (BIS), Benoît Cœuré, fa ny banky foibe dia tsy maintsy mandray an'io mandat io ary […]
Mitohy ny famoriam-bahoaka USDJPY satria mahazo fotoana fohy mampijaly kokoa
Fanadihadiana USDJPY - Mitohy miakatra hatrany ny fiakaran'ny vidim-piainana satria mitombo ny fotoana fohy Mitohy hatrany ny famoriam-bahoaka USDJPY rehefa mitombo ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ireo mpividy dia nahazo an'io toerana io taorian'ny labozia nandrenika be teo akaikin'ny ambaratonga manan-danja 109.100. Nampitombo ny tosidran'ny omby avy eo ary nitohy niakatra hatrany ny tsena. Na izany aza, ny vidiny dia napetraka hahatratra […]
Bitcoin Indostrian'ny harena ankibon'ny tany any Etazonia dia afaka mahazo tombony amin'ny fandraràna an'i China farany teo: Ben'ny tanànan'i Florida
Ny ben'ny tanànan'i Miami, Florida — Francis Suarez — dia mino fa ny famoretana ny Bitcoin (BTC) sy ny vola crypto nataon'ny governemanta sinoa dia fotoana iray lehibe hanararaotan'ny tsena amerikana. Ny ben'ny tanàna, izay miasa ankehitriny amin'ny fananganana ny tanànany ho foiben'ny Bitcoin, dia nilaza tamin'i Bloomberg fa: "Ny fiovana ankehitriny. Miteraka mampino […]
CYCE - Ny mari-pamantarana manova ny lalao izay manamora ny fiantraikany manerantany
Toeram-piasana miaraka amin'ny CYCE, marika ERC-20 mamaky tany izay hanova tanteraka ny fomba fisainantsika momba ny cryptocurrency. Izy io dia ny orinasa Tiorka Crypto Carbon Energy no tetik'ady blockchain voalohany, saingy tsy dia nahomby izy io. Miaraka amin'ny tanjona kendrena hiadiana amin'ny fiovan'ny toetrandro manerantany, CYCE dia maniry ny hanavao ny fanovana ny angovo azo havaozina avy amin'ny […]
Uniswap (UNIUSD) Vidiny: Trigger an'ny hetsika Bullish amin'ny ambaratonga $ 17, mety hitohy hatramin'ny 30 $
Fanadihadiana momba ny vidin'ny Uniswap - 30 septambra Ny vidiny dia mety hiditra amin'ny haavon'ny fanoherana $ 26 ary hitombo mankany amin'ny haavon'ny fanoherana $ 30 sy $ 37. Ny tsy fahaizana miditra amin'ny haavon'ny fanoherana $ 26 amin'ny alàlan'ny omby dia mety hiteraka tsena na fivadihan'ny bearish mankany amin'ny ambaratonga fanohanana amin'ny $ 21, $ 17 ary $ 14. Tsena UNI / USD […]
Karatra Advanced Cash
Famerenana ny carte Cash Advanced: Ahoana ny fomba hijerena ny fetra AdvCash
Advanced Cash, nohafohezina hoe AdvCash, dia fikambanana fandoavam-bola feno nanomboka tamin'ny taona 2014. Nankatoavin'ny komisiona iraisam-pirenena misahana ny asa ara-bola any Belize ity sehatra fandefasana vola ity. Ankoatr'izay, ity rafitra ity dia mifamatotra amin'ny Wave Crest Holdings Limited, malaza amin'ny fiarahamonina Bitcoin debit card. Ity sehatra ity dia manome serivisy lehibe ho an'ny olona rehetra mifandraika amin'ny virtoaly […]
Mijanona amin'ny làlambe mankany ambony ny USDCAD
Alarobia, Septambra 29, 2021
Fanadihadiana momba ny vidin'ny USDCAD - 29 septambra USDCAD dia mijanona amin'ny làlambe miakatra satria tsy mitsahatra ny mipoitra tsipika fitomboana. Ity làlana mankany ambony ity dia namela ny tsena hamaky amin'ny fomba tsy tapaka sy tsy tapaka ny haavon'ny fanoherana sendra azy. Ny tsena dia noho izany mampiseho haavo avo lenta sy ambany ambany kokoa. Na izany aza, voasakana ny tsena […]
Orinasa voasoratra anarana: 11746374
Makà Signal VIPMametraha $ 50 mba hahazoana Signal Forex VIP maimaim-poana mandritra ny 1 taona! Varotra amin'ny MT4 miaraka amin'ny Leverage hatramin'ny 1: 500!